Icala nokuvikelwa kwesizukulwane sesidingo | Martech Zone
With Mashi Ukuhlanya Okushumi Nesithupha imidlalo eqhubekayo, Hlanganisa ukucabanga ukuthi lesi kungaba yisikhathi esihle sokuxhaphaza intshisekelo yemidlalo yabantu abaqondisiwe. I- okusha Hlanganisa i-infographic i-infographic esesikhathini, emnandi isebenzisa izingathekiso ezinesembozo esincane, kodwa ngethemba ezinolwazi ukuze kuveze izinzuzo zokwenza imizamo yokukhiqiza ukufuna komuntu wesithathu.
Amaphuzu abalulekile we-infographic afaka:
Icala Elibi - Imisebenzi Manual kanye slow ukusabela izikhathi
Icala Elikhulu - Ukuzenzekelayo ukuthola amaphuzu amaningi
Ukuvikela Okubi - Ukuvumela idatha eyonakele kudlule
Ukuvikela Okukhulu - Ukuvimba idatha eyonakele
Hlanganisa inikeza izibalo ezithile ezimangalisayo… hhayi nje kuphela ukonga isikhathi iqembu lakho elingenza ngalo, kodwa ukwanda okusheshayo kokukhiqizwa kwesidingo okuholela emiphumeleni emikhulu yebhizinisi. Iningi le-infographic ligxile ekuhlanzekeni, ekupheleleni nasekuhambeni kwedatha edingekayo ekuqondisweni okungcono nokushesha.
Tags: Basketballukuvikelafuna ukukhiqizwaimashi ukuhlanyaicala